बुटवल बजार क्षेत्रका ३ सय ११ घरमाथि चल्यो डोजर, घरधनीहरुद्वारा विरोध - Himalayan Kangaroo
बुटवल बजार क्षेत्रका ३ सय ११ घरमाथि चल्यो डोजर, घरधनीहरुद्वारा विरोध
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०९:०० |
बुटवल । बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । ८२ फुट सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनामा आज डोजर चलाएर सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको हो ।
बुटवल बेलहिया व्यापारिक आयोजनाले प्रहरीले सहयोगमा राजमार्ग चौराहदेखि सांकेतिक रुपमा घरमा डोजर लगाएर सडक विस्तारको सुरु गरेको हो । घर भत्काउन सुरु गरेपछि घरधनीहरुले विरोध समेत गरेका थिए ।
बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म ३.७ किलोमिटर सडकमा ३ सय ११ घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् । जम्मा २५ वटा घरमात्र घरधनीले भत्काएका छन् । त्यसका लागि आयोजनाले १५ दिने सूचना जारी गरिसकेको थियो । आयोजनाका ईन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले सडक क्षेत्रभित्रका घरहरुमा डोजर प्रयोग गरिएको बताए । घरधनीहरूलाई बढी क्षति नहोस् भनेर सम्यमता अपनाउँदा पनि घरधनीले अटेर गरे डोजर चलाएर हटाउनुको विकल्प नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
विगत ३ वर्षदेखि सात, आठ पटक ८२ फुटभित्र परेका संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो । आयोजनाले अहिले सडकका दायाँबायाँ रहका रूखहरू हटाइसकेको छ । ४ वर्ष अगाडि चार लेनमा निर्माण भए पनि बुटवल बजार क्षेत्रको सडक ६ लेनको बनाउने दुई वर्ष अनुमति पाएको थियो । यहाँका ४२ जना घरधनीले आफूहरूका घर ‘नभत्काई पाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
जसले गर्दा करिब १ वर्ष काम रोकिए पनि हालै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाउपर अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला दिएपछि आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई काम शुरू गर्न आग्रह गरेको हो ।
सडक विस्तारको जिम्मा ‘द’ कञ्चनजङ्घा बिरूवा जेभी कन्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौँले लिएको छ । गत वर्ष चैत ३० गते ३० महिनाभित्र चार लेनको सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने गरी ४१ करोड २३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म ४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । यो सडक विस्तार आउँदो २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
Previousनविना लामाको विवाहको मिती तय, को हुन् उनका हुनेवाला श्रीमान ?
Nextआधुनिक जीवनशैलीका यस्ता बानीले बढ्छ मोटोपना
बागमतीको पानीबाट २२ मेगावाट बिजुली उत्पादन
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार ००:१६
जब तीन दिनअघि मुखबाट निलेको सुनको सिक्री दिसाबाट निस्कियो !
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०३:११
१३ श्रावण २०७५, आईतवार ०२:२२
संसदमा जारी अवरोध हटाउने सभामुख घर्तीको प्रयास पुनः असफल
११ पुष २०७३, सोमबार १५:१४